घरमा बुबा र आमालाई ल्याइदिएको मोवाईल विमानस्थलमा छोडेर आउनु पर्दा त्यो छोरालाई कति पिडा हुँदोहो ? - Nepali Mato
घरमा बुबा र आमालाई ल्याइदिएको मोवाईल विमानस्थलमा छोडेर आउनु पर्दा त्यो छोरालाई कति पिडा हुँदोहो ?
२४ माघ २०७५, बिहीबार ०८:४३ February 7, 2019 latestnewsLeaveaComment on घरमा बुबा र आमालाई ल्याइदिएको मोवाईल विमानस्थलमा छोडेर आउनु पर्दा त्यो छोरालाई कति पिडा हुँदोहो ?
काठमाडौं । सरकारले पछिल्लो समय त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सारमा यात्रुको समान जाँचमा निकै कडाइ गरेको छ । तोकिएको भन्दा बढी परिमाणमा समान ल्याए जफत गरेर राखिदिने काम भइरहेको छ । विमानस्थल भन्सारका हाकिम यो क्रम अझै जारी रहेको बताउँछन् ।
त्रिभुवन विमानस्थलको स्तरोन्ततिका लागि सरकारले सोचेको छ । विस्तारै सबैले अपेक्षा गरेजस्तै यो बन्नेछ । यात्रुको सास्ती घटाउने कुरामा हामी पनि चिन्तित छौं । साभार : अनलाइन खबरबाट
जन्ती गितको चर्चा शिखरमा
‘सारेगमप’को सेमिफाइनलमा नेपालका प्रितम र आयुष ( सक्दो सेयर गरौ )
२० जेष्ठ २०७६, सोमबार ११:५२ June 3, 2019 Nepali Mato
भूवन केसी र नायिका रीमा विश्वकर्माको विवाह नवलपरासीमा
२४ जेष्ठ २०७६, शुक्रबार १९:०२ June 7, 2019 Nepali Mato
७ भाद्र २०७६, शनिबार १८:५४ August 24, 2019 Nepali Mato